Nizerià: Polisy Roa Maherifo; Birao Tsy Misy Sisintany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2018 12:06 GMT
Ny hanombohana ny fitetezantsika ny bilaogy amin'ity herinandro ity dia ny ao Nizerià, toerana izay itantaran'i Yomi Says ny tantara tsy fahita andavanandro mahakasika ireo polisy Nizeriàna roalahy izay sahy nisedra nifanandrina taminà mpandroba niisa 30 nirongo fiadiana, na namoy ny ainy aza ny iray tamin'izy roalahy – Polisy Roalahy ‘Mahery noho ny Mahery’ Nandresy Mpandroba 30 Lahy Nirongo Fiadiana:
Ity tantara ity dia toy ny mitondra anao nivoaka avy nijery sarimihetsika lalaovin'i Arnold Schwarzenegger, saingy izy tena hoe tantara niainana marina nitranga teto an'araben'i Nizerià mihitsy.
Nanao bemidina tao amin'ny Oba ireo mpandroba niisa 30 lahy, Oba dia zana-tsampan'ilay banky Nsukka vao nisokatra. Nanao tifi-danitra ireo jiolahy hampitahorana ny olona ary avy eo nandroba ilay banky. Antoandro benanahary no nitrangan'izany, amin'ny 1 ora tolakandro katroka.
Avy dia niatrika tamim-pahamendrehana izany ireto polisy roalahy nanao fisafoana, namaly izany tsara tsy nisy tomika. Arakaraky ny nandehanan'ny segondra no nihintsanan'ireo jiolahy tsirairay: iray;, roa, telo, efatra…..naratra (na maty mihitsy aza?).
30 minitra taty aoriana, tonga ny tarika mpanampy avy amin'ny polisy. Ela loatra ho anà toejavatra iray iankinan'ny aina. Fehiny:
Polisy iray namoy ny ainy no hitan'ireo mpiasan'ilay banky tonga taty aoriana kely, nisy ratra teo amin'ny tratrany, ary iray hafa tsy nahatsiaro tena, ny tànany mbola eo amin'ny fanapotsirana ny basiny. Efa lany ny fitoeram-bàlany.
Faranan'i Yomi Says amin'ny fitakiana ny governemanta Nizeriana mba hijery akaiky ny momba ireo polisy lahy sy vavy zara raha mandray karama sy tsy ampy fandrisihana, izay zary lasa sakana ho azy ireo tsy hivarotra ny ainy ho fiarovana ny firenena:
Eritrereto izay mety ho nitranga raha toa mba tonga ara-potoana ireo tarika mpanampy fa tsy hoe 30 minitra tany aoriana. Iza ao amin'ny governemanta no mba mihaino? Iza no mba handray an-tànana ny fijerena ny tombontsoan'ireny olona ireny? Iza ao amin'ny governemanta no hihaino ny feon'ny fieritreretany ka hanome fitaovana ny polisintsika araka izay sahaza?
Arahabaiko manokana ireo roalahy be herimpo ireo. Azoko antoka fa tena ilaintsika ny manana tantaran-kerimpo bebe kokoa sy olona mahery fo tahaka ireo.
Raha jerena ny fandraharahana sy ny teknolojia ao Nizerià, manoratra i Oro hoe, “Asa 2.0: Fampitandremana Ara-potoana Ho An'ny Fiarahamonina Nizeriàna.” Voalohany dia tsipihany fa naverin'ny teknolojia nofaritana ny fomba fanoratantsika ny tantara sy ny sisiny / fetran'ny birao amin'izao fotoana izao (raha misy) .
Nanova ny fomba fihodin'ny birao ny solosaina, ny finday, ny halatra ampiasàna imailaka, ny fanaovana fivoriana tsy ifanatrehana (teleconferencing), ny blackberries, iPhones sy ireo fitaovana hafa ampiasain'ny Toekarena Vaovao. Taorian'ireo mpisehatra fahiny tamin'ny famokarana (raha tondroina mivantana dia ny tany sy ny herim-pamokarana), ankehitriny isika efa miatrika mpisehatra vaovao, ireo an'ny fampahalalambaovao sy ny teknolojia. Mahazatra ny mandre olona miresaka ny tatitra isanandro vita aloha be ny marainan'ny Alatsinainy, nalefa tao anatin'ny minitra vitsy tamin'ny fampiasàna fitaovana finday avy any an-toerana lavitra any. Tsy hafahafa ihany koa ny mandre resaka — miainga avy any amin'ireo seza tsy lavitra ny seza 22A misy anao eo akakin'ny varavarankely — toy ny hoe “Ety an-dàlana ho any Mumbai aho izao fa ny PDG no handefa aminao ny antontan-taratasy vita sonia afaka 7 minitra latsaka eo ho eo, vao avy nosoniaviko ary efa nalefako any aminy.” Dimy taona lasa izay, raha voamarikareo — avy any ambadik'ireo takelaka fitaratra manasaraka ny birao — misy mpiaramiasa iray mitsinjaka noho ny hafaliana rehefa avy niasa dia vitsivitsy ary niteny irery (teo ampilalaovana baolina kely fiadiana amin'ny rarintsaina), mety niantso tale ianao hilaza aminy ny mety ho fisianà aretina iray nateraky ny rarintsaina. Saingy amin'izao fotoana izao, fantatrao tsara fa ao am-pamaranana fifampiraharahana iray izy, iarahany aminà orinasa iray any aminà toerana mandingana tanibe efatra, miaraka amin'ilay ‘casque Bluetooth’ tsy ilàny mampiasa tànana akory eny an-dohany eny.